Amawashi Okunethezeka Okuthenga Nokuthengisa Emhlabeni Wonke ku-Watch Rapport
# 1 Imakethe
Thola amawashi nobucwebe emhlabeni wonke.
Intela Yemahhala Kuzwelonke
Kungani abantu besethemba
Izizathu okufanele usizame ngazo
Ayikho imibuzo, azikho izinkinga. Funda
Ukuphepha kokuthengiselana kusuka ku-AZ. Funda
Sinomhlane wakho zonke izinyathelo ze
Dlulisa amehlo futhi uthenge imikhiqizo kusuka ku-
inethiwekhi yabathengisi emhlabeni jikelele
Thenga Ngokuphepha sibonga mahhala
umbozwe mahhala. Zero isikweletu sokuthenga
kukho konke okwenziwayo emhlabeni jikelele
Buka Isiqinisekiso Sokwethenjelwa KweRapport
Awekho ama-fakes. Akukho ukukhwabanisa. Akungatshazwa. Thenga okunethezeka
amawashi anokuthula kwengqondo
Thenga ukubalwa okukhulu kwedayimane elikhazimulayo emhlabeni wonke.
Thenga ngeDayimane Shape
Thenga Iphupho Lakho Buka Namuhla NgeZero Liability
Umboziwe. Ukuthengiselana kuphephile futhi kuvikelekile emhlabeni wonke.
UKUVIKELWA KWABATHENGI BAMAHHALA
I-Rolex OYSTER PERPETUAL
I-Rolex YACHT-MASTER II
Hlola i-Watch Rapport
Thenga okungeziwe okusha.
Thola Amagugu Afihliwe
Thola amawashi e-edishini akhawulelwe.
Izingcwethi zikaPiguet Royal Oak
Kuhle kakhulu ★ ★ ★ ★ ★
Umsebenzi wethu ukuhlinzeka abathengi bethu ngamanani angenakuhlulwa, isevisi yamakhasimende esezingeni lomhlaba, kanye nokuthula kwengqondo ngokuthengiselana okuphephile nokuvikelekile emhlabeni jikelele.
Inikwe amandla yi-Google
Benginombuzo mayelana newashi lePanerai Luminor Submersible ngaphambi kokuthenga. Isikhulu senkonzo engixoxe naso besisiza. Iwashi lalinentengo ekhethekile ngakho ngaqhubeka ngalithola. Iwashi lifike ngokushesha futhi ukubukeka nekhwalithi kudlule kakhulu ebengikulindele. Ngaba nokuhlangenwe nakho okuhle.
Bengicabanga ngewashi lami elilandelayo isikhashana futhi ngigcine ngithole amanani entengo amahle kakhulu ekubukeni kwewashi. Lapho sengibeke i-oda, lafika ezinsukwini ezimbalwa. Ngokuqondile njengoba bekulindelekile, i-hublot yami entsha ibukeka inhle. Ngijabule ngokuthenga.
Banokuxhumana okuhle kakhulu okuvela ku-imeyili yokuqala engiyithumele ngokukhathazeka ngokuthumela ngenxa yeCovid-19. Baphendule yonke imibuzo yami ngeqiniso futhi bangenza ngazizwa ngikhululekile ngokuthenga. Iwashi lami lilethwe ngesikhathi. Ungabe usaya phambili! ukubuka ubudlelwano kukusibekele.
Isayithi elihle, amadili amahle impela kumawashi. Ukulethwa okusheshayo. Ngijabule kakhulu. Ngibona kakhulu.
Ngi-ode amawashi amabili (i-Luminor 1950 ne-Nautilus) kubo. Amawashi ayiqiniso. Ukulethwa kwakushesha futhi womabili amawashi ayefana ncamashi njengoba kuchaziwe encazelweni. Uma noma ngubani efunda lesi sibuyekezo ngincoma kakhulu ukuthi uthenge iwashi lakho elilandelayo kule nkampani.
Ukuthenga Okungakhathazeki Ngokuvikelwa Komthengi Wokubika Okusheshayo
Inkokhelo evikelekile ngokuphuma okuthembekile
Inqubo yokuphuma engu-100% ephephile nephephile. Izinkokhelo ezivikelekile nezithembekile ziqinisekisiwe.
Isiqiniseko sobuqiniso sikuvikela emgunyeni nasezimbuzweni. Thenga ngokuthula kwengqondo.
Ukusekelwa okwenziwe ngezifiso emhlabeni wonke
Ithimba lethu lezilimi eziningi liyatholakala ukukusiza mathupha kuyo yonke inqubo yokuthenga.
1. Thola iwashi lakho lamaphupho
2. Khokha ngokuphepha nangokuvikelekile
3. Thola iwashi lakho elisha
4. Gubha futhi ujabulele
Amawashi okunethezeka awumthombo wokuthakazelisa kubantu emhlabeni wonke. Kepha yini efaneleka njengewashi likanokusho? Abanye bangathi yiliphi iwashi elenziwe ngezinto ezibizayo ezifana negolide noma i-platinum. Abanye bangaphikisa ukuthi kufanele kube iwashi lomshini elinokunyakaza okwenziwe ngezandla. Bese kuba khona labo abachaza ukunethezeka ngokususelwa kumikhiqizo edumile efana ne- Rolex, UPatek Philippe, Futhi URichard Mille.
Noma ngabe yini oyifunayo, uzothola amawashi okunethezeka avela kuyo yonke imikhiqizo edumile kuwo wonke amabanga entengo ku-Watch Rapport. Thola futhi uthenge iwashi lakho lamaphupho manje.
Akuwona wonke amawashi okufanele afike amasha efektri. Eqinisweni, abantu abaningi bawela ebuhleni bamawashi ngemiklamo evela kuma-60s noma ama-70s. Lawa mawashi wevintage afaka izinto zomqoqi ezihagelwayo nengcebo efihliwe elinde ukutholwa abalandeli bewashi. Lapha uzothola iziphetho zombili ezibizayo kanye nezingcezu eziyingqayizivele ezinamamodeli angaphambi kwazo angathengwa ngamanani aphansi.
Ukucinga iwashi elifanele lokuvuna kuyingxenye yesipiliyoni sokuthenga jikelele futhi kuvamise ukuguqula ama-novices abe ama-watch aficionados.
Njalo ngenyanga, izinkulungwane zabathandi bamawashi zifuna iwashi labo elilandelayo ku-Watch Rapport - mhlawumbe elakho iwashi abalifunayo? Dala uhlu lwamahhala ngezinyathelo ezimbalwa ezilula bese uthola umthengi wewashi lakho.
Uma sesitholile umthengi wewashi lakho sizokuthinta futhi sikuqinisekise ukuthi leyo nto isatholakala. Uma kunjalo, sizothenga leyo nto kuwe. Ube usuthumela iwashi kithi futhi sizoliqinisekisa.
Ufuna ukukhulula isikhala esithile sesihlakala? Thengisa iwashi lakho manje ku-Watch Rapport.
Uthole iwashi lakho lamaphupho ku-Watch Rapport? Unganqikazi ukwenza leli phupho lifezeke. Indlela ephephe kunazo zonke yokwenza kanjalo nge-Trusted Checkout.
Sikwenza kube lula futhi kube lula ngezinyathelo ezi-3 zokuthenga ngokuphepha nangokuvikelekile. Sibususile ubunzima nezingozi zokuthenga iwashi online. Sinikeza insizakalo yamakhasimende esezingeni lomhlaba kanye nochwepheshe abaqeqeshwe kakhulu amahora angama-24 ngosuku, izinsuku eziyi-7 ngeviki.
Ngaphezu: Ukuthengwa okwenziwe nge-Trusted Checkout kufaka phakathi i-Watch Rapport's FREE Umthengi Protection futhi Isiqinisekiso Sobuqiniso.
Izindaba Ezintsha Kakhulu Nezijabulisa Kakhulu